Budata ESET Dorkbot Cleaner maka Windows
Budata ESET Dorkbot Cleaner
Free Budata maka Windows (0.33 MB)
Budata ESET Dorkbot Cleaner,
ESET Dorkbot Cleaner bụ mmemme antivirus dị mfe na enweghị ego nke Eset mepụtara iji hichaa botnet Dorkbot gbasaa na kọmputa karịrị otu nde. Dorkbot, nke nwere ike tinye kọmputa anyị site na ncheta na -ewepu ọnụ yana netwọ mgbasa ozi mmekọrịta, buru ụzọ zuo okwuntughe na Facebook na Twitter, wee malite ịwụnye ngwanrọ ọjọọ ndị ọzọ site na ịbanye na sistemụ gị nke ọma.
Dorkbot, nke pụtara nihi nnukwu ọrụ, dị na kọmputa gị dịka faịlụ sistemụ 32. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihicha kọmputa gị, ya bụ, hichapụ ya, mana kama iji aka gị mee ya, ị nwere ike budata mmemme Esets Dorkbot ma ọ dị mfe yana nefu.
Mgbe nbudata ihe omume a, naanị mee ya. Ngwanrọ a, nke nwere ike ịchọpụta nime sekọnd ole na ole, na -agwa gị nokpuru ma ị nwere nje Dorkbot na kọmputa gị.
Ọ bụrụ na ị bụghị ezigbo onye ọrụ kọmputa ma ị maghị ma kọmpụta gị nwere nje Dorkbot ma ọ bụ na ọ nweghị, ọ bara uru ibudata ma lelee obere ngwanrọ a ozugbo.
ESET Dorkbot Cleaner Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.33 MB
Kacha ọhụrụ na: 10-10-2021